चिकित्सा एनेशिशिया पाउडर सीरीज आपूर्तिकर्ताओं - AASRO पाउडर
चिकित्सा एनेशिशिया श्रृंखला
/ उत्पादन / मेडिकल एनेस्थेसिया श्रृंखला
चिकित्सा एनेशिशिया पाउडर
हामी मेडिकल एनेशिशिया पाउडर आपूर्तिकर्ताहरू छन्, बिक्रीका लागि मेडिकल एनेशिशिया पाउडर, हामीसँग प्रतिज्ञा गरिएको छ, हाम्रो सबै मेडिकल एनेशिशिया पाउडर शुद्धतासँग होईन 98% भन्दा कम।
एनेटेकेशिया पाउडर सामान्यतया विवरण
औषधिको अभ्यासमा (विशेष गरी सर्जरी र दन्त चिकित्सा), एनेस्थेसिया पाउडर वा एनेस्थेसिया सनसनी वा जागरूकताको अस्थायी प्रेरित प्रेरितको स्थिति हो। यसमा एन्जिज्जेरिया (दुखाइको अवरोध वा रोकथाम), पक्षाघात (मांसपेशी छूट), अन्नोनिया (मेमोरीको हानि), वा बेहोश हुन सक्छ। एनेष्टिटिकल ड्रग्स को प्रभाव को तहत एक रोगी एनिमेटेड हुनु को रूप मा जाना जाता छ।
एनेस्केपिया पाउडर मेडिकल प्रक्रियाहरूको पीडा रहित प्रदर्शन सक्षम पार्दछ जुन गम्भीर वा असुविधाजनक पीडाले अनावश्यक रोगीलाई दियो। एनिस्टेशिया को तीन विस्तृत वर्गहरु लाई अवस्थित छ:
सामान्य एनेस्थेसिया पाउडरले केन्द्रीय तंत्रिका प्रणाली गतिविधिलाई रोक्छ र अनगिन्तीपन र सनसनीको पूर्ण अभावमा परिणाम दियो।
सदाचारले कम डिग्रीको लागि केन्द्रीय तंत्रिका तंत्रलाई दमन गर्दछ, दु: खी र दीर्घकालिक सम्झौताको सिर्जना दुवै दु: ख दुवैलाई बेवास्ता गर्दछ।
क्षेत्रीय एनेशेसिया पाउडर र स्थानीय एनेस्थेसिया, जुन लक्षित शरीर को भाग मा सनसनी को हानि को कारण शरीर र लक्षित तंत्रिका तंत्र को बीच तंत्रिका तीव्रता को संचरण को रोकन गर्दछ। क्षेत्रीय वा स्थानीय एनेस्थेसिया पाउडर अन्तर्गत एक मरीज सचेत रहन्छ, जबसम्म सामान्य एनेस्थेसिया वा झुकाव एकै समयमा व्यवस्थापन हुँदैन। दुई व्यापक कक्षाहरू अवस्थित छन्:
परिधीय blockade शरीर को एक पृथक भाग मा संवेदी धारणा को रोकथाम, जस्तै दंत चिकित्सा को लागि एक दाँत को नुक्सन या एक संपूर्ण अंग मा संवेदी को रोकन को लागि एक तंत्रिका ब्लक को प्रबंधन।
केन्द्रीय, वा न्यूरेक्सियल, ब्लडड्रेडले केन्द्रीय तंत्रिका तर्फको क्षेत्रमा संवेदनालाई व्यवस्थापन गर्दछ, ब्लक क्षेत्रमा बाहिरबाट आगमन संवेदन रोक्न। उदाहरणहरुमा एपिड्युल एनेस्थेसिया र रीढ़ एनेस्थेसिया।
एक चिकित्सा प्रक्रियाको लागि तयारीमा, स्वास्थ्य हेरचाहकर्ताले एनेस्टेकियाले एक वा बढी ड्रग्सको खुट्टा छनौट गर्दछ र निर्धारण गर्दछ जुन प्रकारको प्रक्रिया र विशेष बिरामीको लागि उपयुक्त प्रकार र डिग्री एनेस्थेसिया विशेषताहरू प्राप्त गर्दछ। लागू औषधिको प्रकारहरू सामान्य एनेटिटिक्स, सम्मोहनहरू, सनाशकहरू, न्यूरोमास्कुलर-ब्लक ड्रग्स, म्यागोस्टिक्स, र एन्जिगेटिक्सहरू समावेश छन्।
दुबै एनेस्थेसियाका ठूला र साना जोखिमहरू छन्। प्रमुख जोखिमहरूका उदाहरणहरू मृत्यु, मुटुको हमला र पल्मोनरी एम्बोलिज्म समावेश गर्दछ जबकि सानो जोखिममा postoperative मतली र बान्ता र अस्पताल पढाइ समावेश हुन सक्छ। जटिलता हुने सम्भावना बिरामीको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न कारकहरूको सापेक्ष जोखिमसँग आनुपातिक हुन्छ, शल्यक्रिया गरिरहेको कार्य र एनेस्थेटिक प्रयोगको प्रकार। यी कारणहरू मध्ये, शल्य चिकित्सा अघि व्यक्तिको स्वास्थ्य (एएसए भौतिक स्थिति वर्गीकरण प्रणाली द्वारा स्तरीकृत) एक जटिलता हुने सम्भावनामा सबैभन्दा बढी असर गर्छ। बिरामी सामान्यतया एनेस्थेटिक समाप्त हुने केही मिनेटमा ब्यूँझन्छन् र केही घण्टा भित्र आफ्नो इन्द्रिय पुन: प्राप्त गर्दछन्। एउटा अपवाद एक शर्त हो जुन दीर्घकालीन postoperative संज्ञानात्मक डिसफंक्शन हो, लगातार हप्तेहरू वा महिना लामो समयसम्मको भ्रमको विशेषता हो जुन कार्डियाक शल्य चिकित्सामा लागिरहेकाहरू र वृद्धहरूमा बढी सामान्य हुन्छ।
एनिस्टेशिया पाउडरको प्रकार के हो?
स्थानीय anesthesia शरीर को एक साना भाग साना साना प्रक्रियाहरु को लागि। उदाहरणका लागि, तपाईं दुर्व्यवहार को लागी दुर्व्यवहार को लागी दबाइ को सीधा शल्य चिकित्सा क्षेत्र मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं प्रक्रियाको बेला जागिर रहन सक्नुहुन्छ।
क्षेत्रीय anesthesia पाउडर तपाईंको शरीर को एक ठूलो भाग मा दर्द ब्लक गर्दछ। तपाईं दबाइ वा सुत्न मद्दत गर्न औषधि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। क्षेत्रीय एनेस्थेसिया पाउडर को प्रकारहरु मा निम्न समावेश छन्:
परिधीय तंत्रिका ब्लक। यो एक विशिष्ट तंत्रिका या नसों को समूह को आसपास को दर्द को ब्लक गर्न को लागि अण्डागत को एक शट हो। हातहरू, हात, खुट्टा, खुट्टा वा अनुहारमा प्रक्रियाहरूको लागि ब्लकहरू प्रयोग गरिन्छ।
एपिडरल र रीढ़ एनेस्थेसिया पाउडर। यो स्पाइनल कर्ड र नर्वेसँग जोडिएको निकासको एक शट हो। यसले शरीरको सम्पूर्ण क्षेत्रबाट पेट रोक्छ, जस्तै पेट, कूल्दो, वा खुट्टा।
सामान्य एनेस्थेसिया पाउडरले तपाईंको मस्तिष्क र तपाईंको शरीरको बाँकी भागलाई असर गर्दछ। तपाईं एक नस मार्फत केहि एनेस्थेटिक्स प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ (शिरा, वा IV), र तपाईं केही एनेस्थेटिक्समा सास फेर्न सक्नुहुन्छ। सामान्य एनेस्थेसिया पाउडरको साथ, तपाईं बेहोस हुनुहुन्छ र शल्यक्रियाको क्रममा तपाईं दुखाइ महसुस गर्नुहुन्न।
तपाईं कसरी दुष्प्रभावहरूको जोखिम कम गर्न सक्नुहुन्छ?
अनन्त औषधि पाउडर साइड इफेक्टहरू रोक्नको लागि तपाईं सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यकीन छ कि एक चिकित्सक एनेटेमेओलोजिस्ट तपाईंको हेरचाहमा संलग्न छ। एक चिकित्सक एनेस्नेविओलोजिस्ट एक मेडिकल डाक्टर हो जुन एनेस्थेसिया पाउडर, दुखाइ को प्रबंधन र महत्वपूर्ण हेरविचार चिकित्सा मा माहिर हुन्छ।
तपाईंको शल्यक्रिया गर्नु भन्दा पहिले तपाईंको चिकित्सकको इतिहास, स्वास्थ्य बानी र जीवनशैलीमा छलफल गर्न चिकित्सक एनेस्नेविओलोजिस्टसँग भेट्नुहोस्। यस जानकारीले चिकित्सक एनेस्नेविओलोजिस्टलाई मद्दत गर्दछ कि तपाइँ एनेकेशिया पाउडरमा प्रतिक्रिया कसरी देख्न सक्नुहुन्छ र साइड इफेक्टहरूको जोखिम कम गर्न चरणहरू लिन सक्नुहुन्छ। यो बैठक तपाईंको लागि प्रश्न सोध्न र के आशा गर्न सिक्नुको लागि एक राम्रो समय हो।
सही आपूर्तिकर्ताबाट सही कच्चा सामग्रीको लागि धेरै अर्थ, स्थिर गुणवत्ता र स्थिर बिक्री र सेवा पछि बिक्रीको लागि।
कुनै उत्पादनहरु तपाईँको चयन मिल्ने भेटिएन।